Iindaba -umahluko phakathi kocingo lwentsimbi kunye nocingo lwentsimbi
Izinto ezihonjisiweyo zensimbi
Iphepha lokusika i-Laser
Uqweqwe, iKapa kunye nePosi
Ihenjisi nezinye Hardware
I-Boll engenanto kunye ne-Solid
Izixhobo zokwenza izinto zensimbi
Umahluko phakathi kocingo lwentsimbi kunye nocingo lwentsimbi
Ucingo lwentsimbi ngumhombiso ongatshintshanga kangangeminyaka emininzi kwisakhiwo, kwaye luhlobo lobuhle obuphantsi ukubonisa abantu. Inkqubo flow castra yensimbi: ukusika → nasekuqiniseni → welding kunye nokuhlangana → ipolishi → ukupeyinta → ukupakishwa I-ironrailrail yentsimbi ineemilo ezininzi, kodwa umbala awutshatanga, ixabiso liphezulu kakhulu, ayinyangeki kubushushu nakwingqele, kwaye kulula ukubola xa ubhencekile ukufuma. Kufuneka ipeyintwe kanye ngonyaka, kwaye ukusetyenziswa kwayo kuphezulu kakhulu.
Ke ngoko, abantu abalangazelela ukukhuselwa okuluhlaza nokusingqongileyo ngokuthe ngcembe bayiphethulela ingqalelo yabo kwiingcingo zentsimbi. Kuphela kukocingo lobugcisa lokhuselo lokusingqongileyo oluya kuba yindawo eqaqambileyo yocingo loyilo kwixesha elizayo. Inkqubo yensimbi yokugada intsimbi: kwalenza izinto ezingavuthiwanga → ukubetha ngenqindi → ukubetha → ukuwelda → ipolishi → isanding → ukukha kunye nokukhupha i-phosphating → ukutshiza → ukupakisha. I-Zinc yocingo lwentsimbi ilula kwaye inesisa, enemibala emininzi, ixabiso eliphakathi, kwaye ngokubanzi inobomi benkonzo engaphezulu kweminyaka elishumi! I-guardrail ineempawu ezininzi eziphambili ezinje ngemilo entle, ubomi benkonzo ephezulu, uqoqosho kunye nokukhuselwa kwendalo. Ngomfanekiso wayo omtsha kraca kunye noyilo olugqibeleleyo, inokuqaqambisa ubume obutofotofo kunye nokungcamla kwesakhiwo. Kungcono ukhethe ucingo okanye ucingo lwentsimbi, oluhle kwaye luqinile!
Iimpawu zinc steel guardrail.
1: ayihambelani kuphela kwaye iyimpawu ebonakalayo kunye nokusingqongileyo, kodwa ikwahlula kwiiyunithi ezingabamelwane.
2: Amandla aphezulu, akukho mhlwa, ubomi obude, uluhlu olubanzi lwesicelo, uyilo lwesakhiwo esikhethekileyo, iintlobo ngeentlobo, kunye nembonakalo entle.
I-3: Ukuguquguquka okuhle, ukuqina kunye nokuguquguquka kwezinto ezisisiseko zenza iimveliso zocingo zibe nefuthe elinganyangekiyo.
I-4: Idityaniswe kwimibala eyahlukeneyo, ayisiyiyo kuphela into eneempawu ezintle, kodwa ikwadlala indima ebhetele yokukhusela.
5: Unyango umphezulu ukutshiza electrostatic yenza iimveliso zokubonisa kufuneka umsebenzi self-zokucoca, kunye nokuhlamba imvula kunye umpu amanzi ukutshiza kunokuba mpuluswa entsha.
I-6: Umbala oqaqambileyo, umphezulu ogudileyo, amandla aphezulu, ukomelela okuqinileyo, ukumelana nokubola, i-antistatic, non-fading, non-cracking. Ucingo lokuhombisa.
7: ukhuselo lokusingqongileyo, umsebenzi ococekileyo, ubonelelo olufanelekileyo kunye nemfuno, ubugcisa obuqinileyo, umphezulu wemveliso upolishiwe ngokugudileyo, akukho burrs, anti-corrosion kunye nonyango lokulwa umhlwa endaweni, ukutyabeka okufanayo, ukungena kakuhle, akuchaphazeli ukubona kwabantu, umoya kunye nemvula, ukulwa nokuguga, ayinyangeki kwizinambuzane, inemisebenzi elungileyo, kwaye iyahlangabezana nomgama wokhuseleko kunye namandla aqinileyo.
8: umhombiso olungileyo, imibala etyebileyo, ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zabathengi ezahlukeneyo zeemveliso zecrafrail.
9: Ixabiso lisengqiqweni kwaye linoqoqosho.
Ixesha lokuposa: Mar-20-2021
ukunyathela kwethu, ubunkokheli, ukwenziwa, iimveliso
Indlela yokulungisa ucingo yentsimbi
Umahluko phakathi kocingo lwentsimbi kunye ne-zin ...
Umgangatho Ukhetho ibhulorho waphosa intsimbi g ...
Idilesi: I-16KM SITE S203 WUFAN ROAD KOMATSHINI SHIJIAZHUANG CHINA
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo
Ucingo lwegadi, Ukuhonjiswa kweeGates zentsimbi, Handrail Tube, Kucingo olubiyele, Iphepha leSinyithi, Ukunyathela iPosti,